Inona no atao hoe Copywriting mivantana valiny? Ahoana no manoratra kopia izay niova fo | Martech Zone
Tsy hanatanteraka tsotra izao ny lahatsoratra antonony. Mbola gaga foana aho rehefa mijery lohahevitra mahaliana amin'ny alàlan'ny fikarohana sy sosialy fa rehefa manomboka mamaky ilay lahatsoratra aho dia mankaleo fotsiny ary tsy misy fampahalalana. Raha manangana pejy fidinana roa miaraka amina tolotra mitovy tanteraka ianao, dia manome toky aho fa ny iray izay nosoratan'ny mpanoratra mpanoratra manan-talenta dia hahazo fifantohana bebe kokoa. Amin'ny lafiny iray, mbola maniry ny ho mpanoratra mahay aho. Nanoratra nandritra ny 10 taona aho ary manohy mianatra.
Vaovao farany Koeppel Direct, Fanoratana mivantana valiny: Famoronana kopia izay niova fo, mizara ny sasany amin'ireo tsiambaratelo momba ny fanoratana mivantana amin'ny eran'izao tontolo izao. Ianaro ny fomba hanamboarana ny ezaka valin'ny mpamono mivantana (DR) vetivety, na farafaharatsiny ny fomba fampiasan'ny mpanoratra mpanoratra tianao ny rantsan-tànany majika hanorana ny fitarihanao ho mpanjifa mahafinaritra.
Inona ny kopia valiny mivantana?
Ny valiny mivantana dia fehezan-teny iray izay manokana amin'ny fanoratana fanoratana na paikady fanaovana dokam-barotra izay tadiavinao ny hanaovana hetsika tanteraka. Ny valiny mivantana na ny dokam-barotra dia misy fiantsoana andraikitra hatrany izay misy valiny haingana sy azo refesina. Ohatra: ny pejy fitobiana izay hamenoana ny endrika iray na ny bokotra fipihana Click-to-call dia miteraka antso am-barotra. Ny pejy fitobiana dia mampiasa kopia valiny mivantana hatrany.
Peter Koeppel dia nanondro ireo torohevitra fanoratana mivantana miisa 5 hanombohana anao:
Fantaro ny tanjon'ny kopiao. Mivarotra kiraro ve ianao sa mitady olona hanome noho ny antony?
Omano ny lalanao. Ahoana no hahatratraranao izany tanjona izany? Tonga ny fotoana hanaovana famoronana fohy!
Miomàna hampiseho ny lanjanao. Asehoy foana fa aza milaza mihitsy hoe ohatrinona ny lanja entinao eo ambony latabatra. Ataovy ny lisitr'ireo fomba hamoronana fiovana tsara raha toa ka manao izay angatahinao ilay kendrena.
Alamino ireo hevitra ao amin'ny lisitrao avy amin'ny sarobidy indrindra ho an'ny tanjona voalohany ka hatramin'ny kely indrindra.
Tapaho io. Esory ireo teboka izay tsy dia misy vokany firy.
Ny antsipirian'ny infographic dia dingana tsirairay amin'ny dingana ankapobeny handrafetana, hanoratanao ary hanatsara ny kopian'ny valinteninao mivantana. Manome antsipiriany momba ny fanatsarana ho an'ny salantsalany tsirairay izy io, tsy ny fiantsoana hetsika fotsiny. Peter koa dia manome ohatra vitsivitsy momba ny fomba mety hampiova ny mpamaky ny fiovana tsotra amin'ny verbiage:
"Opportunity”Fa tsy hoe“ indray mandeha eo amin'ny fiainana ”. Tena indray mandeha eo amin'ny fiainana ve io? Mety tsy izany. Raha izany dia maninona no amidinao amin'ny olon-kafa izany? Midira ao amin'io tenanao io!
"Discover”Eo amin'ny toeran'ny“ Tsy mbola fahita. ” Mivarotra zavatra ianao, azo inoana fa efa hitanao, farafaharatsiny amin'ny sary nalain'ny olona iray izay teo amin'ny tena fiainana.
"Exclusive”Noho ny“ Haingana! ” Na dia mety ho antony manosika aza ny fotoana, dia ampiasaina loatra ity iray ity ka tsy mitondra hery mihitsy. Ireo tolotra lany daty ao anatin'ny minitra vitsy monja dia tsy mandeha ihany koa.
Ity ny sary feno, Fanoratana mivantana valiny: Famoronana kopia izay niova fo:
Tags: fanoratana kopiaraikipohy fanoratanatoro-hevitra fanoratanactakopia mivantanavaliny mivantanafampielezan-kevitra mivantanakopia valiny mivantanaahoana noSary torohaykoeppel mivantanapeter koeppelinona nyinona ny valiny mivantanatenyfanoratana hevitra